Miverina mampiantso sy mamerina ny fanadihadiana ireo rehetra tokony hahazo fanonerana ny komisiona amin’ny fampihavanana ny malagasy (CFM). Raha ny statistika dia mahatratra 1233 ireo olona izay tokony hahazo fanonerana nanomboka tamin’ny 2002 ka hatramin’ny 2009.
MIFAMPIARO NY ZANDARY
Harovan’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena fatratra ireo zandary izay namono olona miisa valo tany Betroka. Izany dia taorian’ny nanamelohan’ny fikambanana iraisam-pirenena Transparency International fa vonoina tsy amin’antony ny olona. Nambaran’ny jeneraly Ravalomanana fa afaka manao fanadihadiana iraisam-pirenena izay te-hanao izany satria tsy hanakana azy tsy hiaro ny olony izany.
Dibo-drano tanteraka indray Iarivo omaly. Tsy nisy tsy nimenomenona ny olona ary na ny mpampiasa fiara aza dia fay tanteraka satria simba ny motera ary tafiditra ao anatiny ny ranobe feno loto. Mitombo ihany ny làlana izay tsy azo handehanana intsony ankehitriny raha vao milatsaka kely ny orana, isan’izany i Tsaralalàna. Etsy andanin’izany, ranom-potaka no nivoaka tamin’ny paompin’ny Jirama tamin’ny faritra maro teto an-drenivohitra omaly. Mijaly tanteraka ny vahoaka.
MPANAO GAZETY HIATRIKA FITSARANA
Niakatra fampanoavana omaly i Lôla Rasoamaharo sy Francis Aurélien. Izany dia noho ny fitorian’ny filohan’ny federasionan’ny baolina kitra Doda Andriamiasasoa izay nilaza fa afa-baraka noho ny lahatsoratra indroa miantoana tamin’ny volana novambra izay navoakan’ny gazety La Gazette de la Grande Île. Nilaza ny mpitsara ny hamerenana ny fihainoana satria tsy maintsy hatao fanadihadiana koa ny tonian-dahatsoratra momba ity raharaha ity.
VOASAMBOTRA TANY MAHAJANGA
Voasambotry ny polisy tao Mahajanga ilay lehilahy namono ilay teratany Karana tamin’ny 23 janoary farany teo . Mbola mikaroka fatratra ireo namono ilay teratany karana tompon’ny tranom-barotra Krish koa ireo mpanao fanadihadiana. Ahiana hiverina indray ny opération karàna (OPK) raha araka ny fanazavan’ny mpitandro ny filaminana. nanapa-kevitra izy ireo ny handray fepetra maika mifandraika amin’izany.
MALOTO NY RANON’NY JIRAMA
Maloto tanteraka ny ranon’ny Jirama tonga eny an-tokantranon’ny olona amin’izao. Mitaraina ireo mponina kanefa lazain’ny jirama fa manely tsaho rehefa tsy manana ny porofo mifandraika amin’izany. Ankoatra ny loton’ny rano, tapaka ihany koa ny rano indrindra fa rehefa mirotsaka ny orana toy ny eny Besarety , Soavimbahoaka ka mampikaika ny vahoaka